China Cold stamping မှိုမှိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မှို > ဟာ့ဒ်ဝဲမှို > အအေးခံမှို
အအေးခံခြင်းသေဆုံးခြင်းသည်သေဆုံးသည့်အရာဖြစ်ပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်အတွင်းပိုင်းသတ္တုအတွင်းသို့ပုံပျက်သောအင်အားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဖိအားစက်သို့အခန်းအပူချိန်တွင်ပုံပျက်သောအင်အားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်အစိတ်အပိုင်းများ၏အချို့သောပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန်အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အအေးမိသေဆုံး isakind of die, which applies deformation force to the inside sheet metal at room temperature. It isaspecial tool for obtaining certain shape, size and performance of product parts by applying deformation force at room temperature to the pressure machine.
1. မြင့်မားသော finish ကိုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအထိ 0.01 မီလီမီတာ
2.Processing စိတ်ကြိုက်: ဟုတ်ကဲ့
ပစ်မှတ် - သတ္တု
ဖြစ်စဉ်ကိုအမျိုးအစား: သေဆုံး Blanking
ဆေးဝါးကုသမှု၊ အီလက်ထရောနစ်၊ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ လက်မှုပစ္စည်း၊ စားပွဲတန်ဆာ၊ ပုတီးစေ့
Process ကိုပေါင်းစပ်အမျိုးအစား: တစ်ခုတည်းဖြစ်စဉ်ကိုသေဆုံးလျက်ရှိသည်
အဓိကထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများ - စီအင်စီ၊ ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တူးစက်၊ ကြိတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊
ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းအရေအတွက် - ၃၀
မှိုပစ္စည်း: SKD11, DC53, CR12MOV, CR12,45 # သံမဏိနှင့်အခြားအရည်အသွေးမြင့်မှိုသံမဏိ
၃။ ကုမ္ပဏီတွင်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်ခေတ်မီနည်းပညာများရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူမှိုပုံသဏ္developmentာန်၊ ဒီဇိုင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာ၊ ကြိတ်စက်၊ ရေဒီယိုစက်၊ မျက်နှာပြင်ကြိတ်စက်၊ အတုံး၊ ထိုးနှက်စက်၊ ညှပ်စက်၊ ကွေးစက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆန့်စက်နှင့်အခြားတိကျမှန်ကန်သောစက်ကိရိယာများသည်ဖောက်သည်ဒီဇိုင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်စံနှုန်းအရ၊ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါမှိုစိတ်ကြိုက်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။
Hot Tags: Cold stamping မှို, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း